Ny Villas Vacation Reinvented dia misokatra ankehitriny toy ny The Hills, Saint John
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Nosy Virijiny Amerikana » Ny Villas Vacation Reinvented dia misokatra ankehitriny toy ny The Hills, Saint John
Vondron'olona mpitantana vaovao no nahavita fanavaozana sy fanavaozana ny fananana Sirenusa nanimba ny rivodoza teo aloha.
Ny toerana 22-villa dia nisondrotra ho amin'ny ambaratonga avo lenta Karaiba manintona ary nantsoina indray hoe The Hills, Saint John.
Vistas tsara tarehy any The Hills Saint John, Nosy Virgin US
Eo an-tampon'ny havoana eo ambonin'ny tampon'ny seranan-tsambo marobe ao Cruz Bay, The Hills dia fanilo mandray mpitsidika ny nosy St. John mahafinaritra. Ny oasis an'ity fialantsasatra maoderina ity dia fialan-tsasatra mahavariana ahafahany mizaha ny iray amin'ireo nosy malaza indrindra ao Karaiba.
“Ho hitan'ireo vahininay ireo ny pitsopitsony rehetra izay namelombelona tsara. Ny ala ivelany, ny fanaingoana tanety mahafinaritra ary ny fanavaozana anatiny dia fanombohan'ny fanandramana vaovao an'ny The Hills ihany, " hoy ny filohan'ny Fikambanana Villa, David Adams.
Niorina tamin'ny 5 hektara, ny trano fonenan'i The Hills dia mifangaro villa roa, telo ary efatra misy efitrano fatoriana misy lakozia feno marbra, fandroana en suite misy fandroana famafazana vatana, efitrano fatoriana tsara tarehy, faritra mipetraka amin'ny valindrihana avo, veranda miaraka amin'ny fomba fijery nosy sy ranomasina mivelatra, ary safidin'ny villa misy dobo manokana.
Ny traikefa azon'ny vahiny dia nohamafisina tamin'ny alàlan'ny fanampian'ny The Clubhouse, trano fisakafoanana feno, fisotroana misy ary ivotoerana misy ny hetsika akaikin'ny dobo fiarahamonina miaraka amin'ny fahitana malalaky ny Karaiba sy ireo nosy manodidina maro. Ivon-toeram-panatanjahan-tena feno fitaovana no miandry ireo izay tsy miala sasatra amin'ny fihenan-tena rehefa miala sasatra.
“Ny marika vaovao dia maneho fanoloran-tena vaovao hamorona fahatsiarovana tsy hay hadinoina ho toy ny vohitra safidin'ny mpandeha lafo vidy, " Nanazava i Adams. "Ny Hills dia mandray ireo mpitsidika an'i St. John ho faratampony Virgin Islands andehana mandeha. Manasa ireo mpandeha hametraka ny kompasany izahay ary handeha ho any The Hills. ”
Raha te hamaky vaovao bebe kokoa momba ny fitsidihan'ny Nosy Virginie US Eto.
The EI Advantage: How Four Seasons drive fanavaozana sy fahombiazan'ny orinasa
United Airlines dia manambara ny lohan'ny Operations teknika vaovao